Iindaba - Indlela iSiphatho soMnyango esenziwe ngayo
Ngalo lonke ixesha ucofa isiphatho somnyango ukuvula ucango, ukhe wacinga ukuba ngawaphi amanqanaba ekufuneka uphume kuwo lo mnyango ukusuka ekuqaleni ngaphambi kokuba uvele phambi kwakho? Emva kwesiphatho somnyango esiqhelekileyo yimizamo yokunyamekela abayili kunye nobuchule bobuchwephesha bengcibi.
Ukuzalwa koyilo ngalunye kuthatyathwa kukukhuthaza komzuzwana. Emva kokuba umyili efumene inkuthazo yomzuzu, uyishiya kwimizobo yoyilo. Emva kohlaziyo oluninzi kunye nokuphuculwa kweenkcukacha zoyilo lokuqala, siza kudlala iprototype ye-3D ukuvavanya kunye nokuguqula ukuziva kwesandla sesiphatho somnyango. Isiphatho esihle somnyango kufuneka singabi noyilo lobuhle kuphela, kodwa sithathele ingqalelo esona sandla sisebenzayo sesiphatho somnyango, ukuze uyilo lube noluntu ngakumbi.
Emva kokuqinisekisa umzobo wokugqibela wokuyila, injineli yenza umzobo we-3D ngokusekwe kuyilo loyilo kunye nenkosi yokubumba eqinisekisa iinkcukacha zokubumba, emva koko uqalise ukukhula komngundo. Ke xa kufikwa kwinqanaba le-T1 yokubumba, injineli iphucula ukungunda ngokwesampulu ye-T1, emva koko yenze ukungunda kwesilingo se-T2. Phinda la manyathelo angentla de kube isampula yendlela yokubumba ihlangabezana neemfuno. Emva kokwenza ukungunda kulungiswe, kuya kuqala ukuveliswa kwendlela. Ukuba ukuveliswa kwendlela akukho ngxaki, ukungunda kungasetyenziswa ngokusemthethweni.
Sebenzisa i-3 # zinc ingxubevange equlathe i-0.042% yobhedu njengezinto ezingavuthiyo, inyibilika kubushushu obuphezulu kwaye icinezelwe ekubumbeni, kwaye ufe ngokuphosa nge-160T ukuya ku-200T umatshini wokuphosa u-6s ukufumana ukuchaneka okuphezulu kunye nokuxinana okuphezulu afe castings. Isibambo somnyango akukho lula ukuphuma kwimo ngexesha lokuqhubekeka kokulandelayo, kunye nokuqina kunokuphuculwa ngexesha lokusetyenziswa.
Emva kokuphoswa kokufa okwenziwa kwinkqubo yokuqala, emva koko inkqubo yokupholisha iya kwenziwa. Ukuze kuphuculwe ukusebenza kokucoca, i-YALIS isebenzisa indibaniselwano yokucoca oomatshini ngokuzenzekelayo kunye nokuphola ngesandla ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kunye nomgangatho wokucoca, kuba umgangatho wokucoca umisela umgangatho wolungelelwaniso olwenziwe ngombane.
Izikhewu eziphothiweyo ziya kuthunyelwa ngokukhawuleza kwi-electroplating ukukhusela i-oxidation yesiphatho somnyango. Ukuphucula ukuxhathisa kwe-oxidation kunye nokukhanya kwesiphatho somnyango. Isibambo ngasinye somnyango siya kufakelwa ngombane ngamanqanaba ayi-7-8 e-electroplating kubushushu obuyi-120 ℃ -130 ℃, kwaye isango lokuhlola umgangatho liya komelezwa ukuthintela ukuqala kweemveliso zeblister, iimveliso zamaza kunye nokuphuma kweemilo.
Emva kokulungiswa kwamanqanaba ngamanqanaba, isiphatho somnyango senziwe ngokupheleleyo, emva koko senziwa uhlolo lomgangatho wongqimba kunye nendibano yolwakhiwo, emva koko ipakishwe kwaye ihanjiswe kumawakawaka abathengi. Yonke iminyango yokuphatha oyichukumisayo kubomi bakho bemihla ngemihla yimisebenzi yezandla eyahlukileyo.
YALIS Imfuno yinto yokwenziwa kwesiphatho sobuchule esinamava angaphezulu kweminyaka eli-10 kunye ne-R & D eyahlukeneyo, imveliso kunye nentengiso.